Israa'iil oo fasaxday in lagu tukado masaajidka Al-Aqsa - Worldnews.com
Israa'iil oo fasaxday in lagu tukado masaajidka Al-Aqsa
Goobta barakaysan ee Xaram Al-Shariif, ee Yuhuudduna u taqaanTemple Mount, ayaa maanta xayiraaddii saarrayd laga qaaday oo dib loo furay ka dib markii ay rabshadihii ka dhacay Jimcihii.
Qalalaasahaasi wuxu dhacay ka dib markii laba askari oo booliska Israa'iil ah ay toogteen dabley Carabta dhalashada Israa'iil
Israa'iil oo baajisay salaaddii Jimcaha ee lagu tukan lahaa Masaajidka Al Aqsa
Booliiska Israa'iil ayaa dilay saddex nin oo rasaas ku furay askar ku sugnayd magaaladaa Qudus. Booliiska ayaa sheegay in ay dhaawacmeen saddex askari oo booliis ah, labo...
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ku eedeeyey maamulka Israel inuu awood xad dhaafa u adeegsaday isku dhaca dhex maray ciidamada nabadgelyada iyo...
BBC News 2017-07-22
Israa'iil oo qalabkii wax lagu baarayay ka qaadaysa Qudus
Israa'iil ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa qalabka lagu baaro hubka iyo biraha wax lagu dilo ee ay gaysay aagga barakaysan ee maagaalada Qudus, iyadoo taa badelkeedana...
BBC News 2017-07-25
Dadka Falastiiniyiinta oo dib u bilaabay in ay ku tukadaan misaajidka Al Aqsa
Dadka falastiniyiinta ayaa dib ugu laabtay misaajidka barakaysan ee Al -Aqsa oo aysan muddo laba todobaad ah ku tukan . Dadka muslimiinta ee misaajidka ku cibaadaysanayay...
Israa'iil oo adkaysay ammaanka magaalada Qudus xilli ay xiisadda kacsan tahay
Israa'il ayaa adkaysay ammaanka agagaarka masaajidka barakaysan ee Al -Aqsaa xilli cabsi laga qabo in rabshado halkaasi ay ka dhacaan ka dib markii ay Israailiyiinta...
BBC News 2017-07-21
Madaxwaynaha falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doono joojintii uu joojiyay xiriirkii uu la lahaa Israa'iil ,iyada oo ay jirto in Israa'il...
Madaxwaynaha Falastiiniyiinta oo diiday in xiriirkii Israa\_'iil uu dib u soo celiyo
Madaxwaynaha falastiiniyiinta Mahmoud Abbas ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doono joojintii uu joojiyay xiriirkii uu la lahaa Israa'iil ,iyada oo ay jirto in Israa'il ay meesha ka saartay qalabka wax lagu baaro oo ay horey ugu xirta masaajidka barakysan ee Al- Aqsaa . Qalabkaasi wax lagu baaro ee ay Israa'iil ku rakibtay albaabka laga galo misaajidka ayaa wax ka dhashay...
Falastiiniyiin lagu dilay Bariga Qudus iyo Daanta Galbeed
Saddex Falastiiniyiin ah ayaa naftooda ku waayay rabshado ka dhacay Bariga Qudus iyo Daanta Galbeed, sida ay sheegeen mas'uuliyiin Falastiiniyiin ah. Boqolaal qof ayaa ku dhaawacmay rabshado maalmo ka socday agagaarka masjidul Aqsa. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in wiil 17 jir ah uu dhintay ka dib markii lagu toogtay deegaanka Ras al-Camud ee Bariga...
Weerar lagu qaaday safaarada Isra\_'iil ee dalka Urdun
Dowladda Isra'iil ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkii lagu qaaday safaaradii ay ku laheyd caasimada Amman ee dalka Jordan waxayna xadiday wararka ay tabinayaan warbaahinta dalkaasi. Booliska dalka Urdun ayaa sheegay in la maqlay dhawaqa rasaasta kaddib markii nin deegaanka oo u shaqeynayay shirkad sameysa alaabaha guryaha la dhigto uu galay dhismaha safaarada. Nin u...
Askar Israa\_'iil looga dilay meel lagu cibaadaysto agteeda
Laba askari oo ka tirsan booliska Israa'iil ayaa la dilay, mid seddexaadna waa la dhaawacay, ka dib toogasho ka dhacday meel u dhow goob lagu cibaadaysto oo ku taalla Quddus. Waxaa la sheegay in ay toogteen 3 qof oo carabta Israa'iil ah meel u dhow macbad ay Yuhuuddu u yaqaannaan Temple mount, muslinkuna u yaqaanaan Xaramal-Shariif. Booliska ayaa...
Amiirka UK oo booqasho ku tagaya Bariga Dhexe
Amiirka leh dhaxalka boqortooyada Ingiriiska ayaa booqasho ku tagi doona Israa'iil, dhulka Falastiiniyiinta iyo Jordan xagaaga. Booqashadan oo shan maalmood ah ayaa ka billaaban doonta magaalada Camaan ee dalka Urdun 24ka bisha Juunyo kuna soo dhammaan doonta magaalada Qudus ee barakaysan. Wuxuu booqan doonaa magaalooyinka Jeraj ee dalka Urdun, Tel Aviv oo Israa'iil ah iyo...